Madaxweynaha oo ku dhawaaqay inay dib u bilaabayaan wada hadaladii Somaliland * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay dib u bilaabeyso wada hadaladii Somaliland, isagoo rajo ka muujiyay in mar kale la isku soo laaban doono.
Madaxweynaha oo xalay khudbad ka jeediyay Munaasabada 1-da Luulyo ee 57-guuradii ka soo wareegatay, markii gobolada koofureed xornimada ka qaateen Gumeystihii Talyaaniga iyo is raacii Gobolada Koofur iyo waqooyi ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xusuusto dadkii ka qeyb qaatay halganka.
“Walaalaha Somaliland waxaa u sheegayaa, kalama maarano, waa isu baahanahay, mar un waa isu soo laaban doonaa, waxaa dib u bilaabi doonaa wada hadaladii”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in lagam maarmaan ay tahay in la soo celiyo midnimadii, isla markaana aysan Soomaalida kala maarmin sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dadkii xoriyada u soo halgamay, iyo madaxdii hore ee Soomaaliya ay ku xusuusan doonaan astaamo kala duwan oo ay ugu magac dari doonaan.
“Waxaa muhiim ah dadkii dhaliyay xoriyadan inaan xusuusano oo aan weyneyno, dowladdu waxay balan qaadeysaa in bilaha soo socda iyo sanadaha soo socda in dadkii halgamayaasha ahaa inay ugu magac darto jidadka iyo dhismayaasha”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaa ku yimid hakad, waxaana wada hadalada oo soo socday tan iyo sanadkii 2012, aan wali laga gaarin wax natiijo ah.